Dibana nekati enothando uNeva Masquerade | Amakati eNoti
Ikati Neva ukuzilungisa Yinkomo enenkangeleko enjengethambile kwaye iswiti njengaleyo yaseSiberia; Ngapha koko, ophambili wethu ngumbala okwahlukileyo okwahlukileyo koku. Sisilwanyana esinobuqhetseba, esilungele zonke iintlobo zeentsapho ezifuna umhlobo othuleyo wokubrasha rhoqo.
KwiNoti Gatos siza kukuxelela Zithini iimpawu zalo mfanekiso uthandekayo -Andikaze nditsho ngcono- nendlela yokuyikhathalela ukuze ndonwabe kakhulu.
1 Imvelaphi kunye nembali yekati yeNeva Masquerade
4 Loluphi unonophelo olufunwa yiNeva Masquerade?
5 Ngaba ikati yeNeva Masquerade ivelisa i-aleji?
6 Ixabisa malini ikati yeNeva Masquerade?
7 Iifoto zekati zeNeva Masquerade
Imvelaphi kunye nembali yekati yeNeva Masquerade
Ikati entle yeNeva Masquerade yikati yehlathi eyinzalelwane yengingqi yoMlambo iNeva, eRashiya. Yindidi eyaziwayo kwilizwe labo, nangona kwihlabathi liphela ifumana abalandeli ngesantya esikhawulezayo. Kwaye yile, ngubani onokumelana naloo mehlo athambileyo?
Umahluko kuphela eSiberia ngumbala webhatyi yayo, enemibala, eneendlebe, impumlo, umsila kunye nemilenze yombala omnyama kunawo wonke umzimba.
Ukulinganisa phakathi kwe-4 kunye ne-9kg, iNeva Masquerade yikati yasekhaya ephakathi. Umzimba wayo unemisipha, womelele, kwaye ukhuselwe luluhlu olushinyeneyo lweenwele ezinde. Intloko ingunxantathu, ineendlebe ezithe nkqo namehlo aluhlaza.
Umsila mde, ulinganisa malunga nobukhulu bomzimba wawo. Imilenze yayo imifutshane kodwa yomelele, yenzelwe ukuba ikwazi ukuhamba imigama emide ukuba kunyanzelekile.
Unobomi obulindelweyo be I-20-23 iminyaka.
Yikati Unothando kakhulu kwaye uyadibana ukuba angaphila kakuhle ngokumangalisayo kwikhaya elinabantwana. Yi cwaka kakhuluNangona kufuneka uzilolonge yonke imihla ukuze utshise amandla onawo.
Loluphi unonophelo olufunwa yiNeva Masquerade?
Uya kudinga ukutya okumgangatho ophezulu okutyebileyo kwiiprotheni zezilwanyana (Ubuncinci be-70%). Kuyimfuneko ukunqanda ukunika ukutya okuqulathe ukutya okuziinkozo kunye / okanye iimveliso ezivela kwimveliso njengoko zinokubangela i-aleji, kuba ayinazo ii-enzymes eziyimfuneko ukuzisebenzisa.
Isondli siyacetyiswa ukuba sizalise iiyure ezingama-24. Ikati yeNeva Masquerade itya amatyeli aliqela ngemini, ke kungcono ukuba inokutya okukuyo ngokukhululekileyo. Ukongeza, oku kuya kuba lula ngakumbi kusapho lwakho, kuba kuya kufuneka ukhathazeke kuphela ngokongeza ukutya kusasa kunye / okanye emva kwemini ukuba akunanto.
nayo, isilwanyana kufuneka sinamanzi acocekileyo kwaye amatsha. Oku kuhlala kubalulekile, kodwa ngakumbi ehlotyeni xa amaqondo obushushu ephezulu.
Yonke imihla kufuneka siyibrush ngekhadi ukunqanda iinwele ukuba zingadibani. Kwakhona kubalulekile ukuba sihlambulule amehlo akhe ngamaxesha ngamaxesha nge-gauze ecocekileyo efakwe i-chamomile infusion.
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukususa isitulo esantini yonke imihla, kwaye uyicoca ngokucokisekileyo kanye ngeveki okanye kanye ngenyanga kuxhomekeka kuhlobo lwesanti esetyenzisiweyo. Ngale ndlela, kufuneka uyazi ukuba isanti eqhekezayo, nangona ibiza kakhulu, ihlala ixesha elide kunesiqhelo; Ngapha koko, ukuba uhlala nekati enye kuphela, unokufuna ukucoca ibhokisi yenkunkuma kube kanye ngenyanga.
Nsuku zonke Kuya kufuneka uthathe ixesha lokudlala nayeNokuba ngumtya, ibhola eyenziwe ngefoyile ye-aluminium, okanye isilwanyana esifakiwe. Kuyacetyiswa ukuba uyeke uye egadini okanye kwipatiyo ukuba zibiyelwe kunye / okanye zinoluhlobo oluthile lomnatha othintela ukuvuza ukuze ukwazi ukuhamba.
Olunye ukhetho kukumfundisa ukuba ahambe ngehashe kunye nereash xa eyinja, njengoko sichaza njalo Oku kubhaliwe. Kodwa kuyathakazelisa ukuyikhupha ukuba ubethwe ngumoya ukuba indawo ohlala kuyo izolile kwaye akukho zithuthi zininzi. Umzekelo, esixekweni akufuneki ukhutshwe, kuba isilwanyana sinokuziva sinoxinzelelo kwaye sisoyika.
Ukuba luhlobo olusulungekileyo, oko kukuthi, alukhange lusetyenziswe ngabantu, lusempilweni entle kakhulu. Ngamanye amaxesha inokugula, ibenomkhuhlane okanye umkhuhlane, njengayo nayiphi na ikati. Kwimeko apho ukrokrela ukuba akaphilanga, mthathe aye kugqirha wezilwanyana.
Ngaba ikati yeNeva Masquerade ivelisa i-aleji?
Kwiimeko ezininzi (malunga ne-83%) hayi. Njengomahluko waseSiberia kwaye le ikati ye-hypoallergenic, iNeva Masquerade inomdla kakhulu kwabo banengxaki yokugula.
Ixabisa malini ikati yeNeva Masquerade?
Ikati yeNeva Masquerade inexabiso eliphakathi 900 euro. Sincoma ukuba siyifumane kwikhathalogu yobuchwephesha, kuba ngale ndlela unokuqinisekisa ukuba uboya busempilweni kwaye bufumene ukhathalelo oluyimfuneko. Kulapho baya kuthi bakunike isiqinisekiso semvelaphi kwaye baphendule nayiphi na imibuzo onayo malunga nabazali benjana.
Iifoto zekati zeNeva Masquerade
Yonwabela le mifanekiso mihle yeNeva Masquerade:
Umfanekiso - Nobilpazzi.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Dibana nekati enothando uNeva Masquerade